Tan iyo bilowgii sanadka 2020, Bashkortostan waxay siisay in kabadan 1,4 kun tan oo baradho ah wadamada Bartamaha Aasiya - Nidaamka Baradhada
Tan iyo bilowgii sanadka 2020, 1 tan oo baradho ah ayaa laga dhoofiyay jamhuuriyada Bashkortostan waxaana loo dhoofiyay Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo Turkmenistan.
Marka laga hadlayo badeecadaha nidaamsan, kormeerayaasha Maamulka Rosselkhoznadzor ee Jamhuuriyadda Bashkortostan waxay qaadeen tallaabooyin xakameyn ah, oo ay ku jiraan kormeerid, sambal iyo cilmi baaris shaybaarka FSB "Xarunta Tixraaca Bashkir Rosselkhoznadzor". Iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka baaritaanka, waxaa la ogaaday in badeecooyinka ay u hoggaansamaan shuruudaha phytosanitary ee karantiilka ee waddammada soo galaya.
75 shahaadooyin jirka ah ayaa lasiiyay baradhada wareersan.
Tags: Jamhuuriyadda Bashkortostanwadamada Bartamaha AasiyaDhoofinta baradhada
Gobolka Bryansk wuxuu kordhiyay mugga dhoofinta baradhada 4,6 jeer